Colaadda Soomaalida iyo Oromada ee Itoobiya oo deegaano hor leh ku fiday – Radio Daljir
Colaadda Soomaalida iyo Oromada ee Itoobiya oo deegaano hor leh ku fiday
Luulyo 14, 2018 6:47 b 0
Dagaalada u dhaxeeya Oromada iyo Ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya oo socday muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa sii xoogaystay.
Dagaalka oo labada dhinacba midba midka kalle uu ku eedaynayo ayaa sababay dhimasho, dhaawac iyo barakac baahsan.
Lama oga ilaa iyo hadda ujeedada dagaalka dabada ka riixaya, iyadoona colaadda ay sababtay dad Soomaaliyeed oo la gowracay iyo kuwa laga barakaciyay deegaankooda, waxaana uu iminka uu kusii fidayaa xadka Kenya uu la wadaago Itoobiya.
Maamulada Soomaalida iyo Oromada ee Itoobiya ayaa midba midka kalle ku eedaynaya inuu sabab u yahay colaadda oo uu duulaanka soo qaaday, waxaana wararka madaxabanaan ee laga helayo deegaanka ay sheegayaan in Oromada ay wadaan dhul balaarsi xoog leh oo ay ku barakicinayaan Soomaalida Itoobiya.
Madaxwayne Farmaajo oo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka iyo Banaadir
Madaxwaynaha Soomaaliya oo kusii jeeda xarunta Midowga Yurub ee Brusless